ကျွန်မသာ မိဘဖြစ်ခဲ့လျှင် – Kanaung
Articles	ကျွန်မသာ မိဘဖြစ်ခဲ့လျှင်	Ko Sai
ကျွန်မသားသမီးကို ၃နှစ်နဲ့စာမသင်ခိုင်းပါ။ ၄နှစ်ကျော်မှသင်ပါမည်။ သူ့ဆော့တဲ့အချိန်ထဲက
ဖဲ့ပြီး ကျွန်မစာမသင်ခိုင်းပါ ။အင်္ဂလိပ်ကျောင်း မြန်မာကျောင်း တရုတ်ကျောင်းတွေနဲ့ ရှုပ်နေတဲ့ကလေးတွေကို သနားပါသည်။အချိန်တန် အဲ့စာတွေပြန်သင်လို့ရပါသည်။ ကြီးလာမှ ပြန်ဆော့ခိုင်းလို့မရပါ အဲ့တော့ဆော့တဲ့အရွယ်မှာဆော့ခိုင်းပါမည်။ စာညံ့လည်းကျွန်မ အပြစ်မတင်ပါ ။အားပေးပါမည် ကူညီပါမည်။ ဆရာဝန်တွေ အင်ဂျင်နီရာကြီးတွေ ဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်အတ္တ အတွက်နဲ့ ကလေးရဲ့ဝါသနာကိုရိုက်ချိုးမပြစ်ပါ ။သူလုပ်ချင်တာ ကဗျာဆရာဆိုလည်းလက်ခံပေးမှာပါပဲ ။ သူဇာတ်မင်းသားလုပ်လည်း တတ်နိုင်သလောက်ပုံ့ပိုးပေးမိမှာပါပဲ ။ကလေးမှာလဲသူအပူနဲ့သူပါ ။ သူ့ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားပါမည်။
ကျွန်မဘယ်တော့မှ သူတို့အောက်ခြေအလုပ်ကိုလုပ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ ။ သူ့အလုပ်သူလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးမှာပါ ။ ၅နှစ်လောက်အထိ ထမင်းခွံ့ကျွေးရတာ အညစ်အကြေးဆေးပေးတာတွေ မလုပ်ပေးပါ။ ယောက်ျားလေးမွေးလည်းတတ်သင့်တာ သင်ပေးပါမည် မိန်းမအလုပ် ယောက်ျားအလုပ်မခွဲခြားပဲတတ်နိုင်သလောက်ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးတတ်ဖို့လိုပါသည်။
လိုချင်တိုင်းလဲ ဝယ်မပေးပါ လောကကြီးကတခုလိုချင်ရင် တခုပြန်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ give n take သဘောတရား နားလည်အောင်သင်ပေးရပါဦးမည်။ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မဆူမပြောပါ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ နင့်ကိုကဲ့ရဲ့ကုန်ပြီ ကျွန်မငယ်ငယ်ကဆို အဲ့စကားအမုန်းဆုံးပါ ဘာမဟုတ်တဲ့ အတင်းပြောတဲ့လူတန်းစားတရပ် ချီးကျူးခံရဖို့တခု အတွက် တော့ ကိုယ့်လွပ်လတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါ ။ အဲ့တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနာမည်တတ်ပြီးသားသမီးကိုမဆုံးမပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်သားသမီးအတင်း ဆွှေမျိုးတကာ ပတ်ပြီး အတင်းမတုတ်ပါ နလပိန်းတုန်းပေါင်းစုံက ဝိုင်းပြီအမျိုးတော်ရုံနဲ့ဆုံးမသလိုလိုနဲ့ထိုးနှက်တာ အမုန်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်သားသမီးသိက္ခာ ကိုယ်မှမကာကွယ်လျှင်မည်သူမျှမကာကွယ်ပါ။
ငယ်ငယ်တည်းက စာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ၊ အားကစား၊ ဂီတ အားလုံး လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းလေး တွေ မွေးမြူပေးရပါမည်။စာဖတ်မှကလေးကို စာပေကဆုံးမသွားပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထဲမှာနေရင်ပြီးကော ဂိမ်းဆော့နေတာပဲလေ အပေါင်းအသင်းနဲ့ ဂလေမရိုက်ပြီးတာပဲဆိုပြီး အပေါင်းအသင်းမရှိထုံထိုင်း ပြီး ဗဟုသုတ မရှိ တော့အဖြစ်မခံပါ။ သွားခွင့်လာခွင့်တော့ အတိုင်းအတာ တခုအထိ ပေးထားပါမည် ။လူဆိုတာ အသိုင်းအဝိုင်းမရှိလျှင်အလကားပါ။ မကောင်းတဲ့ကိစ္စတိုင်းကို ကိုယ်ကတားမြစ်တာထက် သူ့စိတ်နဲ့သူမလုပ်ချင်အောင် ပြောပြဖို့ကကိုယ့်တာဝန်ပါ။ အပေါင်းအသင်းမှားလို့ ကလေးက ပျက်ဆီးရတယ်ဆိုတဲ့ မိဘတွေကို အမုန်းဆုံးပဲ။
ကိုယ့်သားသမီးကိုယ်တွေးခေါ်တတ်တဲ့ဦးနှောက်မထည့်ပေးနိုင်ပဲနဲ့ သူများသားသမီးကိုသွားစော်ကားတာ ရှက်စရာအကောင်းဆုံးပါ။ ပြီးတော့ အရွယ်ရောက်လာလို့ရည်းစားထားတာအရမ်းပဲ မိုက်မဲတဲ့ လုပ်ရက်ကိုလုပ်လိုက်သလို ဆက်ဆံခံရတာပါ။ ရည်းစားပဲထားမှာပေါ့ကိုယ်တွေ တောင် လင်ယူလို့ ကလေးမွေးတာပဲ။ ကိုယ့်မိဘလဲယူတာပဲ ဒါသဘာဝ ပဲလေ။ အချိန်တန် စွန့်ခွာမှာပဲ အဲ့ဒါကိုမိဘတွေက အတ္တကြီးပြီး မပေးစားနိုင်ဘူးတို့ငယ်သေးတယ်တို့ ၁၅, ၁၆ နှစ် ကိုမပြောဘူးနော် ၂၃, ၂၄ ကို ကလေးပဲရှိသေးတာတို့အဲ့ဒါတွေအတ္တတွေပါ။ သူတို့အဲ့အရွယ် ကလေးရနေပါပြီ။ သူတို့လဲ သူတို့မိဘလက်ထဲကစွန့်ခွာခဲ့တာပါ ပဲ ။အဲ့ဒါသဘာဝပါ။
ကျွန်မသာ မိဘဖြစ်ခဲ့လျှင် လူမှန်ရင် သံသရာစက်ဝန်းကိုနားလည်ရမှာပါ ။ မတူဘူးမတန်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူကို သိပ်မုန်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးက တူတယ်တန်တယ်ထင်လို့ချစ်နေကြပြီ ။ကိုယ်လည်းပေါင်းမှာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ ဝင်ပြီးလျှာရှည်ကြတာပါ ။ သူတို့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပါပဲမေတ္တာတရားရှိမှချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်း ပါရှိမှာပါ လေလို့မတွေးခေါ်တာ တရားမရှိလို့ပါ ။မိဘက ကောင်းစေချင်လို့ဆိုပေးစားကြဖောက်ပြန်ကြ၊ကွဲကြ ၊ပြဲကြ။ ကိုယ့်ကလေးစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အလုပ် ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ့်ကိုပြန်မုန်းမဲ့အလုပ် တသက်လုံးမလုပ်ပါ။ သူတို့ကိုပြေလည်အောင်အစစအရာရာလက်တွဲခေါ်ပါမည် မိဘ ဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက ပေးဆပ်ရမဲ့အလှည့်ရောက်လာတာပါ ။ အဲ့ဒါကိုဝဋ်ကြွေးဆိုလည်း လာခဲ့ပါ ခံပါ့မည် ပေးဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါ ကိုယ့်အတွက်မမျှော်လင့်ပါ ။ သူတို့ကောင်းစားဖို့ဆို ဘယ်အထိပျံပျံပါ ။ အတတ်နိုင်ဆုံးထမ်းပို့ဖို့ အဆင်သင့်ပါ။
သားသမီးခေါင်းထဲကို တွေးခေါ်တတ်တဲ့ဦးနှောက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ထည့်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ နားလည်တတ်တဲ့မိဘ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့၊ ငါမိဘပဲငါပြောတာနားထောင်ရမယ် ဆိုတဲ့ မိဘမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရပါဦးမည်။ မိဘတိုင်းလည်းအမြဲမမှန်သလိုသားသမီးတိုင်းလည်းအမြဲမမှားပါ။ သူတို့အတွေးအခေါ်တွေကိုလွပ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်ရှိမှအောင်မြင်တဲ့ သားသမီးရမှာပါ။ ကျွန်မသားသမီးသည် တော်ချင်မှတော်မည် အောင်မြင်ချင်မှလည်းအောင်မြင်မည် လိုချင်တာတခုက လူလိုနားလည်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့နဲ့ အတ္တမကြီးရင်ကျေနပ်ပါပြီ ။ ဘဝကိုပျော်ပျော်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ အဲ့လောက်ပဲရရင်သေပျော်ပါပြီ မိဘစကားမြေဝယ်မကျနားထောင်တာကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့မိဘသေသွားရင်အဲ့ကလေး ဘယ်သူ့စကားနားထောင်ပြီး ဘဝကိုရှင်သန်ကြမှာလဲ တုံးစရာမရှိ အ စရာမရှိလို့ သူများဆီက ငှား အ တာတို့ ငှား တုံးတာတို့တော့အဖြစ်မခံပါ။မိဘကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ အများကြီးကြိုးစားပါဦးမည် ။ မိဘအပေါ်စော်ကားလို့ခံစရာဝဋ်ကြွေးရှိလည်း ကျေနပ်စွာခံယူဖို့ ကြိုးစားရပါဦးမည်!!!
Ref. ; Aimt Zarle Maung
Tags Articles Children Education
Previous Articleမိန်းကလေးတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့(၇)မျိုး	Next Articleစိန်ရိုင်းပွင့် ကိုတန်ဖိုးတက်စေဖို့.....	Comments (0)